အဆိုပါကိစ္စတွင်စကားရပ်ဧဒင် Corlu ရထားအဖွစျဆိုးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြား - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး59 Corluဧဒင်ဥယျာဉ် Corlu ရထားအဖြစ်ဆိုးကိစ္စတွင်အပေါ်စကားရပ်တုန်လှုပ်
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 59 Corlu, 59 Tekirdag, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
corlu faciasi ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်အမြန်ရထား soken
Corlu 25 လူတွေကသူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရ, 328 1 Corlu လူတွေကို related တရားစွဲမှု၏ဒုတိယ session တစ်ခုရထားအဖြစ်ဆိုးအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအမြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးကÇorluအရွယ်ရောက်ပညာရေးစင်တာတွင်တွေ့မြင်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ လမ်းလိုင်းစွပ်စွဲတီကောင် "အုပ်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ သူတို့ကဘယ်မှာဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုအလွန်ကောင်းစွာသိကြ၏။ သူတို့ကယခုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသောအခါသတိပေးတာဝန်ရှိသည်လိုရှိ၏။ အဆိုပါ 2001 အတွက်ကစားသမားအနေဖြင့်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ် "ဟုသူကပြောခဲ့သည်။
သမတနိုင်ငံ'' T ကသတင်းအရသိရသည်တည်ရှိသည်; "အစောပိုင်းကနံနက်ယံ၌မိမိတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရသူရထားဘေးအန္တရာယ်အတွက်" ကျနော်တို့ကတရားမျှတမှု "နဖူးစည်းစာတမ်းတရားခွင်မြင်ပါလိမ့်မည် Want အများပြည်သူပညာရေးစင်တာရှေ့၌ပေါ်လာသော။ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကတချို့သားကောင်များအတွက်တရားခွင်၌သို့ရချင်ကြဘူး, တရားရုံးကြားနာမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကအပေါ်စွဲချက်တင်အတွက်သားကောင်များ၏အမည်ကိုသာဝင်နိုင်သည်ဟုသူကဆိုသည်။ ရှေ့နေများနှင့်အတူအစည်းအဝေးတရားရုံးအောက်ပါသားကောင်များများ၏အမည်များသည့်အပေါ်စွဲချက်တင်အတွက်မပါဝင်နေသောတရားခွင်၌မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါဘားကျော်အတော်ကြာအမတ်များ, အစ္စတန်ဘူလ်ဘားအစည်းအရုံးကသမ္မတ Mehmet Durakoğlu'n xnumx'y ထံမှ CHP hdp '' ကြားနာခြင်းနှင့်ဘေးအန္တရာယ်သေဆုံးခဲ့သူကိုဆွေမျိုးသားချင်းများ၏အမည်များထည့်သွင်းထားတဲ့သမ္မတ, စောင့်ကြည့်။
'' သင်ပေါင်း3ရှေ့နေများကပြန်လည်ကု၏ကန့်သတ်မှု ''
သင်တန်းသားများကို၏ဖမ်းဆီးရမိအောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသိအမှတ်ပြုရှေ့နေရှေ့နေများ၏ကြေငြာသွားတယ်။ သားကောင်သူမဆိုအရေးယူပါဘူးဟုတရားရုံးကြားနာ ပတ်သက်. cuff ၏ဆွေမျိုးသားချင်းစော်ကားသူသားကောင်များ၏မိသားစုများ၏ Atalay ရှေ့နေနိုင်သလား။ သူတို့အားတိုင်ကြားဘို့3ရှေ့နေကိုလည်းတရားရုံး၏ကန့်သတ်မှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, Atalay န့်အသတ်များတရားအတိုင်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းရန်ဖို့တရားရုံးဟုမေး3ရှေ့နေကပြောသည်။
'' အားစွဲချက်တင်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခံရဖို့ ''
Ündarစုံစမ်းစစ်ဆေးMürselရှေ့နေများ၏သားကောင်ရဲ့မိသားစုကသူကိုထိရောက်စွာကွပ်မျက်ခံရပါဘူးဟုပြောသည်။ အဆိုပါ4အပေါ်စွဲချက်တင်သာရာဇဝတ်တရားခံကသူတို့အသက်ဆုံးရှုံးသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု 254သာလူများအတွက်တာဝန်ရှိလွှဲပြောင်းÜndar "လူတစ်ဦးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကြွင်းသောအရာတစ်ဦးအနက်ရောင်အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးအပြစ်ရှိခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်အသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာဝိရောဓိများနှင့်ယုတ္တိဗေဒအမှားအယွင်းများတှေအမြားကွီးပါပဲ။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်များကစုံစမ်းစစ်ဆေးကြဘူး။ ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေး 25 လူတစ်ဦး၏လူသတ်သမားများ protected လျက်ရှိသည်။ TCDD, ငါတို့သည်လူသတ်သမားများကာကွယ်ပြည်နယ်ကာကွယ်ထားသည်ဟုနေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ Ündarသည့်အပေါ်စွဲချက်တင်၏ပြန်လာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရှေ့နေMürselÜndarခုံရုံးသမ္မတဖတ်နေတောင်းဆိုနေပြီ "ဟုအဆိုပါအမှတ်တိုင်ပင်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါ 14 လအတွင်းÜndarသူတို့လက်၌ဆက်လက်ဝယ်လိုအားရပ်တည်မှုကိုမျှော်လင့်ယနေ့ beetti.lirterek ။
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား xnumx'inc ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု Halkalı Turgut စွပ်စွဲသူဝံပုလွေတွေဟာကာကွယ်ရေးအရာရှိများကမိမိတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးသူအမည်များကို၏ဆွေမျိုးသားချင်းအားမိမိဆန္ဒသည်းခံခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်ရထားဘေးအန္တရာယ်မှာမီးရထားကို Maintenance မီးရထားကို Maintenance Manager ၏ညွှန်ကြားမှုxnumx'ünc။
ငါ့အိမ်က 130 ကီလိုမီတာနှင့်အတူထိုအဖြစ်အပျက်အကြား Haydarpasa Wolf ကမှာအဖြစ်အပျက်, "၏နေ့၌အိမ်တော်ကိုညွှန်ပြ။ သူကရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နေသာရာသီဥတုက။ ငါမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းရာမှမည်သည့်သတင်းမရှိခဲ့ဘူး။ ငါ့ထံမှမိုးလေဝသ, တာဝန်ရှိသူတွေကိုအနေဖြင့်မည်သည့်သတင်းမခံမယူခဲ့ပါဘူး။ ထိုနေ့ရက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြီးကြပ်ရေးမှူး Çerkezköy'' ကတ်ကြေးကောင်းစွာပြောင်းလဲမှုလုပ်နေခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့မိုးရေချိန်ချက်ချင်းကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်အင်အားကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုမိုးရွာသွန်းမှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးထားကြပြီမဟုတ်။ ငါအစိုးရရှေ့နေရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုအပျော်တမ်းမြင်းကိုလက်မခံကြဘူး။ အခြေအမြစ်မရှိစွပ်စွဲချက်များငါ့ကိုမှာညှိပြီးနေကြသည်။ ငါသည်ငါ့တာဝန်မပြည့်စုံပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
'' ငါကရေးသားခဲ့သည်အပိုဒ်နှစ်ပေါင်း ''
လမ်းများကိုယ်ရံတော်န်ထမ်းဝံပုလွေတွေဟာရာနှစ်, "ဒီကစားသမားကိုနှစ်ပေါင်းလစ်လပ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုညွှန်ပြချည်းဖြစ်ကြသည်။ ငါအရေးအသားအကြောင်းကိုရေးသားခြင်းနှစ်ပေါင်းများစွာရေးသားခဲ့သည်, သင်မူကားဤကိစ္စများကြိုဆိုပါတယ်ပါဘူးငါသိ၏။ သူသည်ကားလမ်း၏ဂိုးသမားကမတော်တဆမှုဖြစ်မဟုတ်ဘူးခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမသိရပါဘူး။ အချိန်မီကင်းစောင့်9ယခုကံမကောင်းလမ်းမရှိသောရှိခဲ့ပါတယ်။ အပိုဆောင်းအစီအမံခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည်။ Stimulatory အချက်ပြမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ ဘယ်အလုပ်ကိုမျှပြုလေ၏။ သို့သော်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ဖို့အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ personeliy သာဂရုစိုက်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
'' ကျနော်တို့မျက်စိနှင့်မြင်သောအရာကိုပြုပြင်တာတွေပါတယ် ''
နှစ်ကြိမ်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင်သောကားတစ်စီး Kurt ရထားလမ်းထိန်းချုပ်ထားစေသည်ဖို့, "Orr ပြဿနာတွေရှိပါတယ်လျှင်ချက်ချင်းကြားဝင်ပြုနေသည်။ သူကရက်စွဲကိုငါ့ခရီးစဉ်၌ရှိသမျှသောအမှုကိုပြု၏။ ဒါဟာမည်သည့်ပြဿနာမျှမမြင်ရပြီ။ ကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်လုပ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့မျက်စိနှင့်မြင်သောအရာကိုပြုပြင်တာတွေပါတယ်။ ကျနော်တို့တူရိယာတိုင်းတာခြင်းတစ်လမ်းရှိသည်။ ယင်းဦးစီးဌာန၏အမိန့်ဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်လျှပ်စစ်တိုင်းတာ2အချိန်လုပ်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ကမတော်တဆမှုန်းကျင်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းစစ်ဆေးမှုများလုပ်ပေးသည့်အခါမဆိုပြဿနာကိုမမွငျခဲ့ဘူး "ဟု၎င်းကပြောသည်။
'' ငါသည်ငါ၏တရားသေလွှတ်တောင်းဆို ''
"လမ်းမျဉ်းမှတ်ဉာဏ်၏အုပ်ထိန်းသူများဖြစ်ကြသည်" Wolf ကသူတို့အလွန်ကောင်းသောလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရှိရာ "ဟုပြောသည်။ သူတို့ကယခုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသောအခါသတိပေးတာဝန်ရှိသည်လိုရှိ၏။ အဆိုပါ 2001 ခုနှစ်တွင်သူသည်ကစားသမားအနေဖြင့်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်စွဲချက်တင်တွင်ပါရှိသောစွပ်စွဲချက်များကိုကိုလက်မခံကြဘူး။ ငါသည်ငါ့တရားသေလွှတ်တောင်းဆိုပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
Edirne, အစ္စတန်ဘူလ်၏Uzunköprüခရိုင် Halkalı'' Moving သို့မဟုတ်သွားကြဖို့အကြောင်း 3626ခရီးသည်နှင့်ရထားလမ်းထံမှထွက်ဖြုတ်ချအနီးဇူလိုင်လ 8 2018 Tekirdag Corlu ခရိုင်အတွင်းခရီးသည်တင်မီးရထားဝန်ထမ်းများကြောင့်Sarılarရပ်ကွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မတော်တဆမှုအတွက် xnumx ရဲ့ကလေး7လူတွေ 25 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်, သူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါချွတ်ယွင်းBaşsavcılığı'nca, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထား၏ xnumx'inc ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု၏အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်မှုအနိုင်ရသူကို Corlu ရီပတ်ဘလီကန် Halkalı ဒါရိုက်တာမီးရထားကို Maintenance မီးရထားကို Maintenance ဦးစီးဌာန Turgut Kurt အဖြစ်အမှုဆောင်xnumx'ünc Çerkezköy အဘယ်သူသည် Ozkan က Parker, လမ်းမကို Maintenance Şefliğiအရပ်ဘက်ကျွန်နှင့် Lightning '' နွှဲသေခြင်းအကြောင်းမေလအတွက်နှစ်စဉ်ယေဘုယျစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ, Bridges ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Cetin မှာ undersigned အဖြစ် Jalaluddin အမြန်တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ TCDD အပေါ် In-line ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်လမ်းမကြီးကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းစားဖိုမှူးများတွင်လမ်းကို Maintenance Şefliği ပြစ်မှုxnumx'şနှင့်ကိစ္စတွင်၎င်း Assize တရားရုံး xnumx'inc Corlu အတွက်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်2မှတစ်နှစ်တစ်ဦး၏တစ်နှစ်ထောင်ဒဏ်အထိဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Tekirdag Corlu ခရိုင်, သူ့မိသားစုနှင့်အခန်းတွင်းနေထိုင်နေကြရှေ့နေများနှင့်အတူခိုင်ခိုင်လုံလုံခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး faciayl နှင့် ပတ်သက်. တရားစွဲဆိုမှု၏ပထမဆုံးကြားနာ၏ Lounge များတွင် 15 လူများ, သေဆုံးခဲ့သည် 1 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်အသေးစားနှင့်ရဲကရိုက်နှက်ခဲ့သညျ။
ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဧဒင်ဥယျာဉ်စီမံကိန်းတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် (ဗီဒီယို) တုန်လှုပ် 13 / 08 / 2016 တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Project မှဧဒင်ဥယျာဉ်ကမ္ဘာတွင်တုန်လှုပ်: Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, မြို့၏ဥရောပဘက်ခြမ်းအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ မြေထဲပင်လယ်လောလောဆယ်မှပင်လယ်နက်ပင်လယ်နက်အတွင်းသင်္ဘော Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်အကြားတစ်ဦးအတုရေလမ်းဖွင့်လှစ်ရန်ပြိုင်ဘက်ကင်းဂိတ်ဝေးနှင့်အတူ Bosporus အတွက်အသွားအလာသက်သာရာနိုင်ရန်အတွက်။ channel 2023 နှစ်ပေါင်းထူထောင်ခံရဖို့မျှော်မှန်းနှစ်ခုအသစ်သောမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းနှင့်အတူမြစ်ဆုံမှာ Marmara ပင်လယ်ပြင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ channel ကို၏ 40-45 ကီလိုမီတာအရှည်; 145-150 မျက်နှာပြင်အကျယ်မီတာနှင့်ခြေရင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 125 မီတာရှိလိမ့်မည်။ ရေအတိမ်အနက် 25 မီတာရှိလိမ့်မည်။ ဤချန်နယ်ကိုလုံးဝ Bosporus တလျှောက်တွင်ရေနံတင်သင်္ဘောအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်, အစ္စတန်ဘူလ်သစ်နှစ်မျိုးကိုကျွန်းဆွယ်၌, ကျွန်းသစ်တစ်ခုကောင်းစွာထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ ...
တူရကီ YHT မတော်တဆကျသခေံ Controller အဖြစ်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်သက်သေခံ 05 / 01 / 2019 မြို့တော်ထဲမှာ, ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုရေးစင်တာ Mehmet Karaca မှာ controller ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလူတစ်ဦးရဲ့ဘဝ YHT9သတ်သောရထားမတော်တဆမှုရည်မှတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, အသကျသခေံထုတ်ပြန်ချက်များကိုပေး၏။ Alican Uludağသမ္မတနိုင်ငံ Khan ကသတိပေးခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြ, "အသစ်သောအခက်အခဲများ, ဖြစ်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, အန္တရာယ်၏အဆက်" အတှကျတောငျးဆိုခကျြအပျေါ YHT ဘူတာသူ့ဟာသူအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူကျန်းအကြားမီးရထားအသွားအလာကိုပြောင်းလဲ9ဒီဇင်ဘာလ 2018 အတွက်အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရ "ဟုအဆိုပါအချက်ပြမှုမတစ်ဦး sine qua မဟုတ်သော" ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ် Cahit Turhan အသုံးအနှုန်းတွေ၌တွေ့ '' မုသာမ '' ဖြစ်ပါတယ်။ ဘူတာ Sincan မှ YHT ဘူတာအကြားဘူတာရုံသောအချက်ပြမှုစနစ်ကနေပြောင်းရွှေ့ရထားနှင့်အတူ Khan က "Eryaman YHT ဘူတာစနစ်မှတစ်ဆင့်နောက်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အလမ်း ...
Corlu ရထားဘေးအန္တရာယ် Misra ကိုယ်ပိုင်အတွက်သူမရဲ့သားကိုဆုံးရှုံး: "ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေ 12 နှင့်အတူအတူတကွတာဝန်မိသားစုအပတ်ဖြစ်ပါတယ်" 01 / 10 / 2018 ဇူလိုင်လ 8 နှစ်အရွယ်သား Oguz Arda Selin အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့်တရားမျှတမှုကိုယ်ပိုင် Misra များအတွက်သူမ၏ရှာပုံတော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမိမိဇနီးဟောင်းဆက်လက်ရထားမတော်တဆမှုအတွက် Tekirdag ၏ 20189Çorluခရိုင်၌တည်၏။ Tekirdag Corlu ဇူလိုင်လ 8 Oz တစ်မကြာခဏတုံ့ပြန်မှုလူမှုမီဒီယာများတွင်ဝေမျှနေသည်အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောရထားမတော်တဆမှုအပြီးလိုအပ်သောအစီအမံယူပြီးတာဝန်ရှိသည် 2018 မြို့နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုယူပြီးတုံ့ပြန်။ ယနေ့တစ်ပတ် 12 ထွက်အောက်ပါအတိုင်းကိုယ်ပိုင် twitter ရှယ်ယာ faciayl နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ဥပဒေရေးရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ non-ဘက်တော်သားဝေဖန်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ရန်အနိုင်ရရှိနေသော်လည်း: တနင်္ဂနွေ 25 လူတစ်ဦးတစ် faceless ရာဇဝတ်မှု၏သားကောင်များ၏ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဆိုလိုသည် ' "သူတို့ကလျစ်လျူရှုငါ့ကိုအသံ' ' ...
Çorluအတွက်ဝန်ကြီးချီးမွမ်း Culvert ရထားဘေးအန္တရာယ် 17 / 09 / 2018 25 လူများ, Corlu CHP ဝန်ကြီး Cahit Turhan ရထားဘေးအန္တရာယ်များအတွက်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံး "145 နှစ်ပေါင်းသည်သူ၏တာဝန်ကင်လုပ်နေတာ" ဟုသူကပြောခဲ့သည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, 25 လူတို့သည်မိမိတို့မေးခွန်းများနှင့်အလားတူအဖြေကိုပေး၏ Tekirdag CHP လက်ထောက်အတွင်းရထားဘေးအန္တရာယ်၏ '' Corlu သူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကာဇန်, တစ်ဦးကျဉ်းမြောင်းတဲ့အာကာသနှင့်ယခုအထိမွငျ၏ပမာဏအတွက်သဘောပေါက်ညွှန်ပြပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Turhan များအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရက်စွဲပြီးနောက်လိုင်းအများအပြား, နေ့ကြုံတွေ့မိုးရေချိန်၏အလွန်တိုတောင်းသောကာလ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည် "ဟု orifices (1873 နှစ်) ပြန်တမ်းအရာ 145 ကတည်းကအပြစ်ကင်းစင်စွာက၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ပြည့်စုံပြီ" ဟု၎င်းကပြောသည်။ သောဘွိုင်လာဘယ်မှာအန္တရာယ်ရှိသောဒေသများတွင်ဝင်ရောက်၏အတိုင်းအတာကိုညွှန်း segment လိုင်း ...
မီးရထားကို Maintenance Manager ကို
မီးရထားကို Maintenance ဦးစီးဌာန
ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဧဒင်ဥယျာဉ်စီမံကိန်းတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် (ဗီဒီယို) တုန်လှုပ်
Corlu ရထားဘေးအန္တရာယ် Misra ကိုယ်ပိုင်အတွက်သူမရဲ့သားကိုဆုံးရှုံး: "ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေ 12 နှင့်အတူအတူတကွတာဝန်မိသားစုအပတ်ဖြစ်ပါတယ်"
Çorluအတွက်ဝန်ကြီးချီးမွမ်း Culvert ရထားဘေးအန္တရာယ်
Corlu 25 25 မြန်နှုန်းကီလိုမီတာအတွင်းရှိရထားဘေးအန္တရာယ်ပြီးနောက်သေပြည်သူ့
လှုပ်ရှားမှုစတင်ဖို့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသူကို Corlu ရထားမိသားစုများ
သင့်လျော်သောအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျှမတရားစွဲဆိုမှုတည်နေရာအတွက် Corlu ရထားဘေးဥပဒ်ကိုအထောက်အထားပေးထား!